तिथि मेरो पत्रु » के महिला सेक्स समयमा बारे सोच्नुहोस्
सेक्स एक विशेष छ, जबकि, घनिष्ठ, मा-यो-क्षण कार्य, कहिलेकाहीं महिला मन आवारा गर्छन, कुनै कुरा सेक्स कति ठूलो. तल सहवास समयमा एक महिला मन प्रवेश गर्न सक्ने विचार केही सिर्फ.
टिभि / सिनेमा: तपाईं बस राम्रो चलचित्र हेर्नुभयो वा टिभी श्रृंखला को बीचमा हुन्छन् चाहे, कहिलेकाहीं षड्यन्त्र र वर्ण सेक्स समयमा हुन्छ परिवर्तन गर्नेबारे सोचिरहनुभएको. हामी एक छ भने हामी यो सहायता गर्न सक्दैन “एक-हा” सेक्स को बीचमा क्षण, यो सिर्फ सेक्स भन्ने प्रेरणादायी छ अर्थ.
डिनर: तर, त्यो उनको काम दिन संभावना देखि ढोका प्रवेश रूपमा तपाईं जस्तै नै उनको खुट्टा को बन्द आफ्नो महिला सर्वनाश के भने तपाईं उनको भित्री जबकि त्यो खाने सोच्न हुनेछ छन्. हामी multitask गर्न सक्षम छन् भने हामी यो सहायता गर्न सक्दैन, प्लस गरेको इमानदार हुन गरौं, सेक्स सामान्यतया भोक माथि काम गर्दछ र तपाईं कि भोजन तयार मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ के थाह धेरै छिटो.
कार्य परिवर्तन: गरेको यो सामना गरौं, कहिलेकाहीं हामी हाम्रो साझेदारहरूसँग बन्द-समन्वयन हो. एक साथी अन्य देखि अधिक आनन्द जब यो विशेष गरी झन् खराब छ. महिलाहरु धेरै एक निश्चित स्थिति मा आफ्नो मान्छे देख्दा, हाम्रो खुशी हाम्रो मानिस सह बनाउन आउँछ देखि तिनीहरूले एउटा नयाँ सुझाव छैन. जब यो हुन्छ, को विचार “उहाँले परिवर्तन गर्न यो स्थिति मा पनि छ. म जस्तै धेरै उहाँ रूपमा यो मा भएको बहाना छ”, “किन हामी भर्खरै कोशिश एक नयाँ स्थिति गर्दै र प्रेम छैन?”, र / वा “गोली, किन यो स्थिति चोट गर्छ?” हाम्रो मस्तिष्क मा पप.
नयाँ कार्य: बिस्तर मा यसलाई स्विच सधैं राम्रो विचार छ, जबकि, सबै स्थिति तिनीहरूले लाग्न जत्तिकै सजिलो छन्. यो मजा र हंसी छ महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी स्थिति सिर्फ काम पनि लाग्दैन जब. देखि “उहाँले गल्ति गलत छेद मा यो राखिदिन्थिन्” गर्न “हामी एक गिरने बिना चिकनाई पुग्न सक्छ” गर्न “म हामी यसलाई जस्तै मा बग्छन् भने गोज सक्छ विचार”, संभावित महिला मन माध्यम जान सक्छ कि सबै विचार हो.
Orgasms: महिलाहरु, हामी सबै केहि हामी हाम्रो मानिसको अगाडि सह भनेर थाह. यस अक्सर घटना हुन सक्छ जबकि, यो समय-समयमा हुने गर्छ. अनि, जबकि, पनि हाम्रो संभोग पछि, यौन अचम्मको महसुस, हामी पनि हाम्रो साथी खुसी पार्ने. महिला विचार गर्दा यी क्षण मा छ “म जोर लज्जित भने, शायद भनी सह मदत गर्नेछ”.
जनावर: तिनीहरूले परिवारका एक धेरै विशेष सदस्य हुन् हामी सबै हाम्रो घरपालुवा जनावरको प्रेम. यस कारण हामी meows रूपमा सेक्स को समयमा खुला ढोका राख्न गर्छन, छाल, र सेक्स को समयमा ढोकामा scratching मूड बाधा सक्छ. तथापि, यो विकल्प निमन्त्रणा आउँछ संग आफ्नो पोस्तीन मित्र बाटक्स तपाईं हेर्न सक्छ कि. हामी सोचेका आफ्नो आँखा पर्न जब यो छ “म मेरो पाल्तु जनावर मलाई हेरिरहेका संग सेक्स हुन सक्दैन” वा “किन त्यो / त्यो हामीलाई नजिक बढिरहेको छ? म हाम्रो सेक्स बाधित लिन चाहँदैनन्”.
डर छैन, यस्ता विचार रूप पुरुष महिलाहरु मनमा माध्यम ले जाने, यौन अझै पनि धेरै रमाइलो छ. अनि महिला, के तपाईं सेक्स को समयमा बहु-भन्ठान्ने मात्र हुन् चिन्ता आवश्यकता.